Adhi uu leeyahay siyaasi reer Itoobiya ah 'oo afduub ahaan loo kaxeystay' - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAdhi uu leeyahay siyaasi reer Itoobiya ah ‘oo afduub ahaan loo kaxeystay’
Adhi uu leeyahay siyaasi reer Itoobiya ah ‘oo afduub ahaan loo kaxeystay’
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Mas’uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee Arena Tigray ee qowmiyadda Tigray-ga Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in saraakiil maxalli ah ay afduub ahaan u xareysteen ari uu leeyahay nin siyaasi ah, iyagoo ujeeddada ay ka leeyihiin ay tahay si ay ugu khasbaan inuu siyaasadda isaga baxo.
Xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada ayaa 16 neef oo ari ah ka kaxeystay xero ku taalla meel u dhow guriga uu dagan yahay Zenawi Asmelash ee degmada Kola Temben.
Weerarkan ayaa gobolka Tigray-ga ka dhacay maalintii Arbacada, sida uu sheegay Abrha Desta.
Mr Zenawi ayaa horay loo xiray waxaana u hanjabay saraakiisha xisbiga talada haya ee Tigray-ga – haddana waxay xisbiga muxaafidka ah arigiisa u afduubteen si ay ugu cadaadiyaan, sida uu sheegay hoggaamiyaha mucaaradka.
Arena Tigray waa xisbi laga aasaasay qowmiyadda Tigreeda dhexdeeda waxayna dadaal ugu jiraan si ay xubnahooda u kordhiyaan, xilli sanadka dambe la filayo inay dhacdo doorashada Itoobiya.
Sheekadan ayaa dood weyn ka dhex abuurtay baraha xiriirka bulshada, ka dib markii uu Mr Abrha bartiisa Facebook-ga kusoo qoray: “Xisbiga talada haya wuxuu ka gudbay dadkii wuxuuna u tallaabay xoolaha aan waxba galabsanin”.
Qaar ka mid ah dadka ayaa sii faafiyay qoraalkaas, halka kuwo kalena ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan dhibaatada loo geystay xoolaha, iyagoo dalbaday in sida ugu dhakhsiyaha badan loo sii daayo.
Hase ahaatee dadka qaarkood ayaa sheekadan u fasirtay dhinac kale, waxayna sheegeen inay qeyb ka tahay xeeladaha siyaasadeed ee ay ku dagaallamayaan xisbiga mucaaradka.
Taliyaha booliska degmada ayaa BBC-da u xaqiijiyay in ariga ay ku jiraan gacanta ciidanka, balse wax faahfaahin ah kama uusan bixinin waxa ay ku saabsan tahay arrinta.
“Saddex ka mid ah ariga ayey u suurta gashay inay ka baxsadaan saldhigga, waxayna dib ugu laabteen xeradoodii”, ayuu yiri Mr Zenawi.
Xisbiga TPLF ee eedeyntan loo jeediyay ayaan wali wax jawaab ah ka bixinin arrintaas.
WARBIXIN: Sidee Dagaalkii Labaad ee Adduunka uu u badelay tababarka milateri?
Sanjay Dutt: Wasiirka waa saaxiibkey laakiin arrinta uu iga sheegay waxba kama jiraan